Nhau - China hombodo hombe yekutengesa kunze, asi yavo yekutengesa yakawandisa iri kudzikira
Semutengesi mukuru wenguvo, China inotengesa kunze kwedu madhora zana emabhirioni ehembe gore roga-roga, zvakanyanya kupfuura kupinza kwayo kunze. Nekudaro, nekushandurwa kweChina chimiro chehupfumi mumakore achangopfuura, indasitiri yehembe yakapinda zvishoma nezvishoma padanho rakakura, uye zvikamu zvechigadzirwa zvakapfumisa zvishoma nezvishoma, China yehembe yekupinza uye yekuwedzera kunze kwenyika iri kudzikira zvishoma nezvishoma.
Kubva 2014 kusvika 2019, China yehembe yekutengesa nguo chiyero chiri kudzikira zvishoma nezvishoma. Zvinoenderana nenhamba kubva kuGeneral Administration yeCustoms, mu2018, kukosha kwekutengesa kunze kweChina zvipfeko uye zvishongedzo zvaive US $ 157.812 bhiriyoni (yakashandurwa kubva paavhareji dhora-RENMINBI mwero wekutsinhana wemwedzi unoenderana), zvichidzika 0.68% gore pagore. Kubva muna Ndira kusvika Chivabvu 2019, kukosha kwekunze kwekunze kweChina zvipfeko uye zvishongedzo zvaive US $ 51.429 bhiriyoni, zvichidzika 7.28% gore-ne-gore.
Kubva 2014 kusvika 2019, yeChina nguvo kupinzwa kunze kwakakura nekukurumidza. Zvinoenderana nenhamba kubva kuGeneral Administration yeCustoms, mu2018, kukosha kwekupinza kwehembe dzeChinese uye zvekushandisa zvaive 8.261 bhiriyoni emadhora ekuUS, kukwira 14.80 muzana gore pagore. Kubva muna Ndira kusvika Kubvumbi 2019, kukosha kwekupinza kwehembe dzeChinese uye zvekushandisa zvaive US $ 2.715 bhiriyoni, kukwira 11.41% gore-ne-gore.
China indasitiri yenguo inonyanyotumirwa kuEU, iyo US, ASEAN neJapan. Muna 2018, chipfeko cheChina chinotumirwa kunze kwenyika kuEU chakasvika 33.334 bhiriyoni emadhora ekuUS, ichiteverwa neUS neJapan nemabhiriyoni emadhora 32.153 emadhora ekuAmerica uye mabhiriyoni gumi nemashanu emadhora emadhora ekuAmerica, zvichiteerana. Kubva pamafambiro emakore apfuura, China yekushambadzira hembe kuUnited States neJapan yatanga zvakare kukura, nepo kuderera kwekutumira kunze kuEuropean Union kwadzikira, uye kutengeswa kweChina kune dzimwe nyika dziri munzira ye "One Belt Uye Imwe Road" kwave kunakidzwa. kukura kwakanaka. Mu2018, kuburitswa kweChina kuenda kuVietnam neMyanmar kwakawedzera neanopfuura makumi mana muzana, nepo kunze kwenyika kuRussia, Hong Kong neEuropean Union zvakadzikira ne11.17 muzana, 4.38 muzana uye 0.79 muzana zvichiteerana.
Kubva pamaonero ezvigadzirwa zvekutengesa kunze, zvinoenderana neanotarisirwa manhamba, pakati pemhando makumi maviri neshanu dzezvipfeko zvinotumirwa neChina muna 2018, huwandu hwehuwandu hwekutengesa hwepamusoro hwezvigadzirwa gumi zvaive zvinopfuura mabhiriyoni makumi mana nemakumi mana emamiriyoni emadhora ekuAmerica, achiverengera angangoita makumi matatu muzana ezvese zvinotengeswa kunze kwenyika. kukosha. Pakati pavo, "chemakemikari fiber yakarukwa crochet pullovers, cardigans, vest, nezvimwe." chave chiri chigadzirwa chinotumirwa kunze kwenyika, uye mutengo wekutengesera wechigadzirwa ichi unosvika 10.270 mabhiriyoni emadhora ekuAmerica muna 2018.
Kubva munaNdira kusvika Kubvumbi 2019, China yepamusoro 10 yezvigadzirwa indasitiri kunze kwenyika yakazara 11.071 bhiriyoni US madhora
Post nguva: Sep-04-2020